राजधानीको सडकमा दिउँसै व्लु फिल्म लागेपछि…. – Akhabar Dainik
राजधानीको सडकमा दिउँसै व्लु फिल्म लागेपछि….
इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता एउटा सडकमा बटुवाहरु त्यतिबेला आश्चर्यचकित भए जतिबेला त्यहाँ राखिएको एउटा इलेक्ट्रोनिक होर्डिङ बोर्डमा व्लु फिल्म सुरु भयो । यो इलेक्ट्रोनिक बोर्ड सहरका मेयरको कार्यालय नजिकै राखिएको थियो । यो पोर्न फिल्म करिब पाँच मिनेटसम्म चलेको थियो । तर, अचानक सहरमा बत्ती गएपछि पोर्न फिल्म पनि बन्द भएको थियो ।
जाकार्ताकी जनसूचना अधिकारी एडी बिर्याएनो स्टिारीले यो घटना निकै गम्भीर भएको बताइन् । स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार उनले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् । यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा प्रहरीले छानविन गरिरहेको बताइन् । एउटा निजी कम्पनीको डिस्प्ले बोर्ड ह्याक भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
संचार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि ट्वीटरमा समेत बहस सुरु भएको छ। ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरु डिस्प्ले बोर्डमा पोर्न फिल्म चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो वा प्रोफेशनल ह्याकरको काम भन्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन् । पेट क्रोनिनले लेखेका छन्, ओहो जाकार्ता, तिमीले मलाई आश्चर्यमका पार्न छाडेनौ ।
हालैको दिनमा उचित परमिट र लाइसेन्स नभएका कारण सहरमा राखिएका २९ होर्डिङ बोर्ड हटाइएको थियो । एजेन्सी}